အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင်ရောင်းချပေးသွားမည့် ကျပ် ၁၀၀၀ တန်အောင်ဘာလေသိန်းထီလက်မှတ်များကိုဝယ်ယူရောင်းချလိုသူများအတွက် အသိပေးကြေညာချက် | IRD
(ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ လ ၁၆ ရက်)
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲသည် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် အောင်ဘာလေသိန်းထီလက်မှတ်များကို မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးသို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင်ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ရာ ထီစာအုပ်ဝယ်ယူရောင်းချလိုသူများအနေဖြင့် အောက်ပါအချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ကြရန် ကြေညာအပ်ပါသည်-
(က) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း နေထိုင်သူများအနေဖြင့် အောင်ဘာလေထီစာအုပ်များ ဝယ်ယူရောင်းချလိုပါက အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ(ရန်ကုန်)သို့လည်ကောင်း၊ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာနယ်နမိတ်အတွင်း နေထိုင်သူများအနေဖြင့် အောင်ဘာလေထီစာအုပ်များဝယ်ယူရောင်းချလိုပါက အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ (မန္တလေးရုံးခွဲ) သို့လည်းကောင်း၊ ကျန်တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များမှ အောင်ဘာလေထီစာအုပ်များ ဝယ်ယူရောင်းချလိုသူများအနေဖြင့် မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့နယ်ရှိ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးများသို့လည်းကောင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
( ခ ) အောင်ဘာလေထီလက်မှတ်ဝယ်ယူရောင်းချလိုသူများသည် ထီလုပ်ငန်းအမှန်တကယ် ဆောင်ရွက်သူဖြစ်ရန် လိုအပ်ပြီး လျှောက်လွှာနှင့်အတူ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား မူရင်း/မိတ္တူ နှင့် အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း မူရင်း/မိတ္တူများဖြင့် ပူးတွဲတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
( ဂ ) လျှောက်လွှာများကို သက်ဆိုင်ရာရုံးများသို့ ( ၁၆ . ၁၁ . ၂၀၁၈ )ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းသွားရန်ဖြစ်ပါသည်။
(ဃ) ကျပ် ၅၀၀ တန် ထီစာအုပ်များအတွက် လစဉ်ဝယ်ယူခွင့်ရရှိထားသော ထီစာအုပ်အရေအတွက်အရ ထီစာအုပ်တစ်အုပ်လျှင် အာမခံငွေ (Deposit) ကျပ် (၁၀၀)နှုန်းဖြင့် (၃)လစာ ကြိုတင်ပေးသွင်း၍လည်းကောင်း၊ ကျပ် ၁၀၀၀ တန် ထီစာအုပ်များအတွက် ထီစာအုပ် တစ်အုပ်လျှင် အာမခံငွေ (Deposit) ကျပ် (၂၀၀) နှုန်းဖြင့် (၃)လစာ ကြိုတင်ပေးသွင်း၍လည်း ကောင်း ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။
( င ) ကျပ် ၁၀၀၀ တန်ထီ ဝယ်ယူခွင့်ရရှိမည့်သူများသည် ကျပ် ၅၀၀ တန် အောင်ဘာလေထီများကို သတ်မှတ်အချိုးဖြင့် ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။
( စ ) ထီစာအုပ်ဝယ်ယူရောင်းချလိုသူများအနေဖြင့် တစ်လလျှင် မိမိရောင်းချမည့် ထီစာအုပ်အရေအတွက်အရ ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်လုံးအတွက် တာဝန်ယူရောင်းချမည့် ထီစာအုပ်အရေအတွက်ကိုဖော်ပြလျက် မပျက်မကွက်ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူကတိစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ဆ) ထီစာအုပ်များ ဝယ်ယူရောင်းချလိုသူများအနေဖြင့် သဘောတူကတိစာချုပ်ပါ သဘောတူညီချက်များကို လေးစားလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက ထီစာအုပ်ဝယ်ယူခွင့်ရပ်စဲခြင်း၊ အာမခံ ငွေ(Deposit)များ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာအဖြစ်သိမ်းယူခြင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
( ဇ ) ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသည့် ထီစာအုပ်အရေအတွက်အား အတည်ပြုချက်ရရှိပါက သဘောတူကတိ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ အာမခံငွေ(Deposit)ပေးသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို (၁၆.၁၂.၂၀၁၈) ရက် နေ့နောက်ဆုံးထား၍ အပြီးဆောင်ရွက်ရပါမည်။